Fumanisa izibonelelo zokusebenzisa i-serum yeenwele | IBezzia
Kutheni kufuneka usebenzise i-serum yeenwele
Susana Garcia | 03/04/2021 20:00 | Ubuhle, Iimveliso zobuhle
Ayinamsebenzi nokuba iinwele zakho zinde, zimfutshane, zigobile, zithe nkqo, zimdaka, mdaka okanye blonde, kuba eyona nto ibalulekileyo ekugqibeleni kukuba unempilo kwaye ukhathalele iinwele, into engafumaneki lula. Siza kukunika ezinye zingaphi izimvo zokufunda ukusebenzisa i-serum yeenwele. Kanye njengokuba sikhathalela ubuso bethu, kunyanzelekile ukuba ukhathalele impilo yeenwele. Kubalulekile ukufaka iimveliso eziyimfuneko koku.
Siza kuthetha ngayo Kutheni kufuneka usebenzise i-serum yeenwele kunye nezibonelelo zokwenza njalo. Iserum yimveliso esiyifumanayo ebusweni kwaye egxile kwizithako ezisebenzayo ukukhathalela ngokunzulu iinwele, zisebenza apho kufanelekileyo, kuba zininzi iintlobo zeserum.
1 Yenzelwe ntoni
2 Uyifaka njani i-serum
3 Iseramu yazo zonke iinwele
El I-serum yeenwele yimveliso esebenzayo yokunyamekela ubuninzi beenwele ezonakeleyo okanye ezifuna ukhathalelo olongezelelekileyo, ngaphaya koko sikunika imihla ngemihla. Kule mveliso kuhlala kukho uxinzelelo oluphezulu lwezinto ezisebenzayo ezinceda ukulungisa umonakalo weenyanga ezinweleni, kungoko zihlala zibiza kakhulu. Nangona kuyinyani ukuba iisamu zisetyenziswa kuphela amaxesha ngamaxesha, ukwenza unyango kunyango. Unokufumana iiserum ezihambelana neemfuno ezahlukeneyo, kodwa inyani kukuba ezi ntlobo zeemveliso ngokubanzi zihlala zijolise ekunikezeni iinwele zikhanye, zitywine ii-cuticles, ziwunike amanzi kwaye zikhathalele nentloko.
Uyifaka njani i-serum
El I-serum yeenwele ihlala isetyenziswa ngesixa esincinci kakhuluNjengoko iyimveliso egxile kakhulu, akufuneki sisebenzise kakhulu. Kukwanjalo nakwiserum yobuso. Ngamathontsi ambalwa ayaphululwa kwizinwele ezomileyo okanye ezimanzi, kuxhomekeka kwisiphumo esifunekayo. Isetyenziswe kwiiphelo kwaye iya phezulu. Ngokwesiqhelo inokusetyenziswa nakwisikhumba sentloko kunye neengcambu. Ngayiphi na imeko, kufuneka sihlale siyifunda imiyalelo yomenzi ukuze sazi ukusetyenziswa kwayo ngqo kunye nendlela ehanjiswa ngayo.
Iseramu yazo zonke iinwele
Namhlanje sifumana amathuba amaninzi ngokwezithambiso. Enye yazo kukuba sinokubona iintlobo ezininzi ze iimveliso zeenwele kumxholo weserum. Enye yezona zinto zithengwa mva nje yile egxile ekunyamekeleni iinwele ngokufaka ubushushu, ikwanqanda nefrizz. Ezi ntlobo ze-serum zihlala zisetyenziswa xa kuhlanjwa iinwele nganye ukuze zingonakali ngokufaka izixhobo ezishushu ezifana neentsimbi okanye isomisi. Isiphumo sineenwele ezikhuselweyo nge-cuticle evaliweyo, ekhanyayo ngaphandle kweziphelo. Yiseramu ekhusela kwaye ithintele ukonakala kweenwele.
El iinwele ezisongekileyo lolunye uhlobo lweenwele omele ukulujonga kwiseramu ezifanelekileyo iimpawu zayo. Kukho ezinye ezinokukunceda ukugcina i-curl kunye ne-hydrate. Le nwele ithambekele ekubeni yome kwaye ilahle ukukhanya, ukongeza ekubambeni ngokulula, ke i-serum inokuba sisongezo esihle ukuyinika i-hydration eyongezelelweyo amaxesha ngamaxesha egcina ii-curls zichaziwe kwaye zinamanzi. UFrizz yenye yeentshaba ezinkulu zolu hlobo lweenwele.
El I-serum ukuya kwi-hydrate yenye yezona zinto zifunwa kakhulu. Ngokwesiqhelo, ukuba sifuna i-serum esemgangathweni, kukuntywilisela zonke iintlobo zeenwele. Kukho i-serum enokufunyanwa ngexabiso elifikelelekayo kwaye isinceda ukuba sinike i-hydration eyongezelelweyo kwizinwele. Ingxaki yeziphelo ezomileyo yinto ephantse ivele kwaye iiserum zinokunceda ukuyiphelisa le nto.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ubuhle » Kutheni kufuneka usebenzise i-serum yeenwele
IMacaroni enesosi yespinatshi
Ukuzivocavoca okuyinzuzo kwe-osteoarthritis